သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ-၁ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on December 21, 2012 at 11:19 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၁။ လူတစ်ယောက်အကြောင်း၊ ဘာသာရပ်တစ်ခုအကြောင်းရည်ညွှန်းရာမှာ about, on, concerning/ regarding, deal with something, စသည့်ဝေါဟာရအသုံးတွေနှင့်အမျိုးမျိုးသုံးကြပါ တယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ “အကြောင်း၊ ပတ်သက်၍၊ ခေါင်းစဉ်” စသည့်အဓိပ္ပါယ်ထွက်သော်လည်း ရေးသားပြောဆိုပုံ၊ တွဲသုံးသည့်စကားလုံး၊ ၀ါကျတွင်းရှိသူတို့၏တည်နေရာ မတူခြားနားကြ၏။ ဒါကြောင့်တစ်ခုချင်းကိုဘယ်လိုသုံးစွဲသည်ကိုသိထားပါမှ အင်္ဂလိပ်စာရေးသားပြောဆိုသည့်အခါ မှန်မှန်ကန်ကန် အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
about – concerned withaparticular subject or person : လူတစ်ယောက်အကြောင်း၊ ကိစ္စတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍
e.g. She talks about him all the time.
သူ့ အကြောင်း ကိုအမြဲတမ်းပြောနေတော့တာပဲ။
I’m reading about some children who get lost onamountain. တောင်ပေါ်မှာလမ်းပျောက်သွားတဲ့ကလေးတစ်စု အကြောင်း ဖတ်နေတာ။
Does anyone have any questions about tonight’s homework?
ဒီညအိမ်စာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးစရာရှိလား။
be about : အကြောင်း
“It’sareally good film.” “What’s it about?” “It’s about some students in New York.”
“အဲဒါတကယ့်ရုပ်ရှင်ကောင်းပဲ”။“ ဘာအကြောင်းလဲ။ ” “နယူးယောက်မြို့ကကျောင်းသားတစ်ချို့အကြောင်းပါ။”
အကြောင်းအရာ သပ်သပ်မှတ်မှတ် ဘာသာရပ်တစ်ခုအကြောင်းရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းဆိုရင် on နဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်။
Professor Dodd is givingalecture on medival history.
ပါမေက္ခဒေါ့က ဥရောပအလယ်ခေတ် အကြောင်း သင်ခန်းစာပို့ချနေတယ်။
opinions/ideas/views တွေကို on နဲ့တွဲပြီး “ပတ်သက်၍” ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့သုံးနိုင်တယ်။
A survey of young people’s opinions on marriage.
အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လူငယ်တို့၏ခံယူချက်အပေါ်ကောက်ယူသည့်စစ်တမ်းတစ်ခု။
ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိပြုရမှာက on ကို စာအုပ်တွေအကြောင်းပြောတာထက် ပိုပြီးလေးနက်တဲ့ခေါင်းစဉ်၊ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေမှာ သုံးသင့်ပါတယ်။
concerning/reagarding : ပတ်သက်၍
သူတို့ကိုခန့်ညားတဲ့စာအရေးအသားမှာသုံးပါတယ်။ ရုပ်ရှင်၊ စာအုပ်၊ ဇာတ်လမ်းတွေအကြောင်းပြောရာမှာမသုံးဘဲနဲ့ သတင်းအချက်အလက်၊ စိတ်ကူးစိတ်သမ်း၊ မေးခွန်း၊ ဆွေးနွေးချက်တွေမှာသုံးပါတယ်။
I've hadaletter from the tax authorities concerning my tax payments.
အခွန်အရာရှိတွေဆီက ကျွန်တော့်အခွန်ပေးဆောင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စာတစ်စာင်ရထားတယ်။
Thank you for your letter regarding my student loan.
ကျွန်တော်၏ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ ပတ်သက်သည့် လူကြီးမင်း၏စာရလို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
deal with something (phrasal verb) ၀တ္ထု၊ ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်မ်း၊ ပြဇာတ်တစ်ခုဟာ ဘာအကြောင်းအရာကို တင်ပြထားသလဲ၊ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သလဲလို့ပြောရာမှာသုံးသည်။
The story deals with the problems of poverty and unemployment.
ဒီဇတ်လမ်းကတော့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းတင်ပြ ထားတယ်။
၂။ အရေအတွက်ကို ကိန်းဂဏန်းအတိအကျမဟုတ်ဘဲ ခန့်မှန်းချေပြောဆိုရာမှာ about, around, approximately, roughly, or so, give or take လို့အမျိုးမျိုးပြောကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ “လောက်၊ အားဖြင့်၊ အနီးစပ်ဆုံး၊ ခန့်မှန်းခြေ၊ အကြမ်းဖျင်း၊ ခန့်မျှ” စသည့်အဓိပ္ပါယ်ရှိကြပါတယ်။
about /around (especially US): ခန့်မျှ
ဂဏန်း၊ ပမာဏ၊ အကွာအဝေး၊ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွက် အပိုအလိုအနည်းငယ်အတွင်းချိန်ဆပြောဆိုမှုဖြစ်သည်။
The church is aboutamile away. ဘုရားကျောင်းက တစ်မိုင်လောက်မှာရှိတယ်။
It’s about2years since I last saw him. သူ့ကိုနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကပဲ။
The murder was committed at around noon on Friday. လူသတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာ သောကြာနေ့မွန်းတည့်ချိန်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲ။
approximately - အနီးစပ်ဆုံး၊ ခန့်မှန်းခြေ
Each disk can store approximately 144 pages of text.
ဓါတ်ပြားတစ်ခုစီဟာ စာမျက်နှာ ၁၄၄ နီးပါး သိမ်းထားနိုင်တယ်။
Approximately 30% the community is British.
ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ ဗြိတိသျှတွေဖြစ်တယ်။
*approximately ဟာ about/around တို့ထက်ပိုပြီးစာစကားဆန်ပါတယ်။ အရေးမှာအသုံးပြုပါတယ်။
roughly - အကြမ်းဖျင်း
ပမာဏတစ်ခုကို သိတော့သိတယ်။ ဒါပေမယ့်အတိအကျမသိလို့ခန့်မှန်းပြောဆိုရတဲ့ အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်။
A new computer like this one would cost roughly $2000.
ဒီလိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးဟာအကြမ်းဖျင်း ဒေါ်လာ၂၀၀၀ လောက်တော့ကျလိမ့်မယ်။
There were roughly 50 people there. အဲဒီမှာအကြမ်းဖျင်း လူ၅၀လောက်တော့ရှိမယ်။
or so - မတင်မကျ
How many people are coming? လူဘယ်နှစ်ယောက်လောက်လာမှာလဲ။
Oh, aboutadozen or so. တစ်ဒါဇင်လောက်။ အပိုအလိုတော့နည်းနည်းရှိမှာပေါ့။
A month or so later, they heard that Blake was dead.
နောက် တစ်လ ၀န်းကျင် အကြာမှာတော့ ဘလိတ်သေကြောင်းသူတို့ကြားရတော့တယ်။
(မြန်မာအရပ်သုံးစကားမှာတော့ “ပျော့ပျော့”၊ “မတင်မကျ”၊ “မပိုမသာ” လို့သုံးကြသလိုပါ။)
give or take ဆိုပါတော့။ ထားပါတော့။
အထူးသဖြင့်အပြောစကားမှာသုံးပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုဟာ အတိအကျတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အနီးစပ်ဆုံးမှန်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါ give or takeafew days/ miles/ dollars စသည်ဖြင့်ပြောကြပါတယ်။
She has been working there for two years, give or takeafew weeks.
သူအဲဒီမှာလုပ်နေတာ နှစ်နှစ်နီးပါးရှိပြီ။ ထားပါတော့ နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်။
The cinema is close to the road, give or takeafew hundred yards.
ref: Longman Essential Activator
သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ - ၁
သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ - ၃
သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ - ၄
သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ - ၅
သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ - ၆
သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ - ၇
Permalink Reply by Khin May Kyu on December 21, 2012 at 12:37
Permalink Reply by win win shwe on December 21, 2012 at 13:22
Permalink Reply by Aung Ko Ko Htun on December 21, 2012 at 13:33
Permalink Reply by shwelat on December 21, 2012 at 14:00
Thanks for appreciate vocabulary!
Permalink Reply by Pyae lay on December 21, 2012 at 14:41
thx u very much for ur post
Permalink Reply by Thike Htun on December 21, 2012 at 15:20
Permalink Reply by koyemyinttun on December 21, 2012 at 15:21
Permalink Reply by Win Win Than on December 22, 2012 at 10:01
Permalink Reply by kawblut on December 22, 2012 at 13:09
Permalink Reply by kawblut on December 22, 2012 at 13:12
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on December 22, 2012 at 13:50
Permalink Reply by Thandarwinhlaing on December 22, 2012 at 19:37
Thank u so much.I have got knowledge.